यसपालीको नबरात्रीमा यी ३ राशिका व्यक्तिलाई हुन्छ फलिफाप नै फलिफाप, हेर्नुहोस् कतै तपाईको राशि त परेन ! – Fewa Times
यसपालीको नबरात्रीमा यी ३ राशिका व्यक्तिलाई हुन्छ फलिफाप नै फलिफाप, हेर्नुहोस् कतै तपाईको राशि त परेन !
प्रकाशित मिति: October 11, 2018 12:26 pm
काठमाडौँ – ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यसपाली नवरात्रीमा ग्रहको राम्रो प्रभाव पर्ने हुँदा १२ राशी मध्य ३ राशिका व्यक्तिहरुलाई विशेष लाभ मिल्नेछ। यी राशीका व्यक्तिहरुले नवरात्री भर दुर्गा भवानीको पूजा गर्दा जीवनमा आईपरेका संकटहरुबाट मुक्ति मिल्ने र अधिक धनलाभ गर्ने अवसर मिल्नेछ। आउनुहोस कुन –कुन हुन् यी राशी जानीराखौः
मेष राशी : यसपाली नवरात्रीभर विधिवत रुपमा नवदुर्गा भवानीको पूजा गर्दा मेष राशी भएका व्यक्तिहरुलाई निकै लाभ मिल्ने योग रहेको छ। खासगरि यस अवधिभर विशेष पूजाआजा गर्दा विद्यार्थीहरुका लागि कृपा मिल्ने हुँदा जीवनमा ठूलो सफलता हँसिल गर्न सक्ने छन्। वस्तु शास्त्रका अनुसार नवरात्रीको अवधिमा यस राशीका व्यक्तिहरुले अन्य ठूला व्यक्तिको हातबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसका साथै नवदुर्गा भवानीको विशेष कृपा मिल्ने हुँदा व्यापार व्यसायमा सफलता मिल्ने र नोकरीमा पदोनत्ति हुने देखिन्छ।
कुम्भ राशी : कुम्भ राशी हुने व्यक्तिहरुका लागि यसपाली नवरात्रीमा हनुमानजीको विशेष कृपा मिल्ने हुँदा अधिक धनलाभ गर्ने अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ। यी व्यक्तिहरुको सबै अधूर काम बन्ने र त्यसबाट अन्यन्त लाभ मिल्नेछ। यस राशीका व्यक्तिहरुले नवरात्रीभर दुर्गा भवानीको पूजा गर्दा जीवनमा विभिन्न मनसम्मान प्राप्त गर्न सक्ने र अन्य व्यक्तिको विश्वासको पात्र समेत बन्न सकिनेछ। यस अवधिभर गरेका राम्रा कामहरुका कारण घर परिवारमा आईपरेका सम्पूर्ण समस्याहरु नष्ट हुने र जीवनभर सुखी वा खुशी रहन सकिन्छ।
तुला राशी : वस्तुशास्त्रका अनुसार तुला राशी भएका व्यक्तिहरुको लागि यसपाली नवरात्रीभर राम्रो संयोग रहने देखिएको छ। यस राशीका व्यक्तिहरुलाई नवरात्रीमा हनुमानजीको विशेष कृपा मिल्ने हुँदा अधूर रहेका सम्पूर्ण कामहरु बन्ने र आउने दिनहरुमा लाभ मिल्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। नवरात्रीभर नव दुर्गा भवानीको पूजा गर्दा जीवनभर सुख शान्ति प्राप्त गर्न सकिनेछ भने ठूलो मात्रामा धन लाभगर्ने समय रहेको छ। यस राशीका व्यक्तिहरुले नवरात्रीभर गरेका राम्रा कामका कारण जीवनमा ठूलो सफलता हँसिल गर्न सक्नेछन्।